इतिहासकै उचाईमा नेपाली क्रिकेट, एक खेल अगावै ‘एक दिवसीय’ मान्यता | Himalaya Post
इतिहासकै उचाईमा नेपाली क्रिकेट, एक खेल अगावै ‘एक दिवसीय’ मान्यता
Posted by Himalaya Post | १ चैत्र २०७४, बिहीबार २०:०४ |
काठमाडौँ– दशकौंदेखि नेपाली क्रिकेटले देखेको ओडीआई अर्थात एकदिवसीय मान्यताको सपना आज पूरा भएको छ । आज भएको प्ले अफमा नेपालले पपुवा न्यूगिनी तथा नेदरल्याण्डले हङकङलाई पराजित गरेसंगै एक दिवसीय मान्यता पक्का गरेको हो ।
नेदरल्याण्डसँग हङकङ ४४ रनले पराजित भएसँगै नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट खेलेको २२ वर्षपछि पहिलो पटक एक दिवसीय क्रिकेटको मान्यता पाएको हो । यदि हङकङले नेदरल्याण्ड्सलाई हराएको भए सातौं स्थानका लागि हुने खेलमा हङकङलाई हराउर्नै पर्नेथियो ।
तर, अब नेदरल्याण्ड्सँग हुने अन्तिम खेलको नजिता जे भएपनि नेपालले ओडीआई स्टाटस पक्का गरेको छ ।
के हो एकदिवसीय (ओडीआई) मान्यता ? यसले के फाइदा गर्छ ?
एक दिवसीय मान्यता क्रिकेटको नियमनकारी निकाय अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी)ले ५० ओभरको खेलमा दिने मान्यता हो । जुन नेपालले अहिले सम्म पाउन सकेको थिएन । यस अघि नेपालले ५० ओभरका खेललाई लिस्ट ए का रुपमा खेल्दै आए थियो । नेपाल अहिलेसम्म एशोसिएसट टिम मात्र हो ।
तर ओडीआई पाएपछि नेपाल आफैले विभिन्न क्रिकेट बोर्डसंग सम्वन्वय गरेर म्याच आयोजना गर्न सक्नेछ । अब ओडीआई स्टाटस पाएपछि टिमले एक्सपोजर पाउनेछ । साथै अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले दिने सहयोग बद्धि हुनेछ । करिब ७७ मिलियन अमेरिकी डलर अब नेपाली क्रिकेटलार्य प्राप्त हुनेछ ।
तर, ओडीआई स्टाटस मात्र सबै कुरा होइन । नेपाली क्रिकेटको घरेलु संरचना बलियो छैन भने क्रिकेट संघ लामो समयदेखि निलम्बनमा छ । त्यसैले क्रिकेट संघको विवाद सल्टाएर घरेलु संरचना बलियो नबनाएसम्म ओडीआई स्टाटसबाट पर्याप्त लाभ लिन सकिन्नँ ।
Previousराष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले लिए सपथ
Nextअब केन्द्रमा २१ मन्त्रालय हुने, थपिए तीन मन्त्रालय (सूचि)
मारुती सिमेन्ट : अकबरी सुनलाई कसी लगाउनु पर्दैन !
जब ‘क्याप्टेन कूल’ धोनीले आफ्नो संयमता गुमाए..
२९ चैत्र २०७५, शुक्रबार १२:५५